Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguZana
A iflethi elula nenhle kumbindi wedolophu, kwisitrato esizolileyo , kwimizuzu emi-5 ngeenyawo ukusuka kwinqaba endala kunye neThenga lesitrato. , iTV yekhebula, indawo yokupaka yabucala ebiyelwe simahla enendawo yokumisa kunye nekhamera yevidiyo kunye negaraji engaphantsi komhlaba. Ukhuseleko olupheleleyo lwemoto yakho. Enye yezona ndawo zibalaseleyo zokutyela zelizwe eNis ziinqanaba ezili-10 ukusuka kwiflethi.
Uya kuba nendawo yakho ngexesha lokuhlala kwakho. Ifulethi lonke liya kufumaneka kuwe. Ukuba uhlala ngaphezulu kweentsuku ezisi-7, siza kubuyisela ezo zisetyenzisiweyo ngeetawuli ezicocekileyo kunye nelinen xa ucelile. Naluphi na olunye uncedo olufanelekileyo luyafumaneka xa ulucelile.
Umbuki zindwendwe ngu- Zana
My name is Zana Antanaskovic. I am from Nis,Serbia.I work as a manager of insurance company.Mine interest are painting,traveling on an ordinary place, mounting climbing.
Iindwendwe zinokuthembela kuncedo lwam ukuba zineengxaki. Ndihlala ndifumaneka ukuba iindwendwe zifuna ukuchazelwa indlela yokufika kwindawo ezifuna ukuyibona. Ndiyakuthanda ukunyuka intaba kwaye ndingathanda kakhulu ukukukhokela ukuze ubone ezona ndawo ziyinyani kunye nendalo entle.
Iindwendwe zinokuthembela kuncedo lwam ukuba zineengxaki. Ndihlala ndifumaneka ukuba iindwendwe zifuna ukuchazelwa indlela yokufika kwindawo ezifuna ukuyibona. Ndiyakuthanda ukunyu…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Niš